WhatsApp ၏နောက်ဆုံး beta ကို download လုပ်ရန် Androidsis
WhatsApp ၏နောက်ဆုံး beta ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
Francisco Ruiz | | Android application များ, လဲ tutorial, Whatsapp
Androidsis ၏နောက်လိုက်များဖြစ်ကြောင်းသင်သိခဲ့ကြသည့်အတိုင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ခဲ့သောပန်းတိုင်များထဲမှတစ်ခုမှာဤ Android Android အသိုင်းအဝိုင်း၏သုံးစွဲသူများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုသတိပြုမိရန်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မင်းကိုတန်ခိုးပုံစံငါယူလာပေးတယ် နောက်ဆုံးသော WhatsApp ၏ beta ကို download လုပ်ပါ၊ သင် chats သန့်ရှင်းရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်ကိုခံစားနိုင်သည် အရာသာ application ၏နောက်ဆုံး beta ကိုဗားရှင်းတွင်ပါဝင်သည်။
ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ မင်းဒါကိုရချင်ရင် အတွင်းသိုလှောင်မှုသန့်ရှင်းရေးကိုသက်ဝင်စေသောနောက်ဆုံးထုတ် WhatsApp ၏ beta ဗားရှင်း ငါတို့ Android ၏ဖျက်ဆီးတတ်သော WhatsApp ဖိုင်တွဲကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်နောက်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်သင်ကျန်ခဲ့သောဗီဒီယိုတွင်သင်နောက်ဆုံး WhatsApp ၏ beta ကိုသင်ရရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်။ ။
internal storage cleanup feature နှင့်အတူနောက်ဆုံးထုတ် WhatsApp beta ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ
ဒီအချက်ပြီးသွားပြီ၊ မင်းတို့အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်၊ WhatsApp ၏ beta ကိုအများပြည်သူအတွက်ပိတ်ထားသည် Play Store မှမဟုတ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်း၏ beta tester အစီအစဉ်တွင်အသင်းဝင်မဟုတ်ပါကသင်သည် WhatsApp မှ beta updates များကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤ beta updates တွင် WhatsApp ၏လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များသည်များသောအားဖြင့်ပထမနေရာတွင်ပါတတ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တင်များ၏အကြောင်းအရာရွေးချယ်သန့်ရှင်းရေး.
beta tester ခွဲတမ်းကိုပိတ်ထားသော်လည်း iOS ကဲ့သို့အခြားမိုဘိုင်း operating system များနှင့်မတူပဲ Android ပေါ်တွင် Android အများစုတွင်သင်သိလိမ့်မည်။ Android တွင် application များကို root အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ apk format ဖြင့်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည် flashing၊ jailbreak သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမျှမပြုလုပ်ပါ။
WhatsApp ၏နောက်ဆုံး beta ကိုတပ်ဆင်ရန်သင်သာလိုအပ်လိမ့်မည် ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောငါစွန့်ခွာသော apk ကို download လုပ်ပါနှင့် WhatsApp ကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ၊ ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်လုံခြုံရေးကဏ္inတွင် Android settings မှ ဦး စွာခွင့်ပြုချက်များကိုအရင်ထားရမည်။ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ o မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ.
ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်မျှဝေသည့် apk ကိုကျွန်ုပ်ဆက်လက် download ရယူနိုင်သည် Telegram မှ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်း ဒီ link ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်တယ်လီဂရမ်သုံးစွဲသူများမဟုတ်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်အခွင့်အလမ်းမပေးလိုသောသူများသည်ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုနောက်ဆုံး WhatsApp ကို၏နောက်ဆုံး beta ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့်ကနေဒီအခြား link ကိုထားခဲ့ပါ Telegram ကိုသွားစရာမလိုဘဲ
သင်နှင့်မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အကြောင်းမေးခွန်းများရှိပါက WhatsApp ၏ဤနောက်ဆုံး beta ကိုထည့်သွင်းခြင်း / အဆင့်မြှင့်ခြင်း, ငါသည်သင်တို့ကိုဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာငါလက်ျာဘက်ထားခဲ့သောဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်, ထိုတွင်သင်သည်လျှောက်လွှာ၏တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် update ကိုအတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်မည်သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်ကတည်းက။
ပြီးဆုံးဖို့ငါအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုငါထားခဲ့ပါ ဒီအတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ နောက်ဆုံးနောက်ဆုံး WhatsApp ပါဝင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » WhatsApp ၏နောက်ဆုံး beta ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
Pixel2ကင်မရာ၏ပထမဆုံးတရားဝင်နမူနာများကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရသည်